निजी शोरुम उद्घाटन गर्न मुख्यमन्त्री राई हेलिकोप्टरबाट ओखलढुंगा पुगे — Hamro Sanchar
निजी शोरुम उद्घाटन गर्न मुख्यमन्त्री राई हेलिकोप्टरबाट ओखलढुंगा पुगे
ओखलढुंगा, माघ २८- प्रदेश नं. १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राई महिन्द्रा कम्पनीको सोरुम उद्घाटन गर्न हेलिकोप्टर चढेर ओखलढुंगा पुगेका छन । सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ५ वर्णालुमा रुम्जाटार अटोमोवाइल्स प्रालिले सञ्चालन ल्याएको शोरुम उद्घाटन गर्न मुख्यमन्त्री राई सोलुखुम्बुको पत्ताले हुँदै रुम्जाटार पुगेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री राई, प्रदेश सभाका सांसद अम्बीरबाबु गुरुङसहित सोलुखुम्बुको पत्तालेमा केही समय हेलिकोप्टर राखेर हिमपात भएको क्षेत्र र महालंगुर हिमश्रृंखला अवलोकनपछि रुम्जाटार पुगेका थिए । उनि महेन्द्रा कम्पनीका प्रतिनिधि, सांसद गुरुङसहित रुम्जाटार विमानस्थलमा समिट हेलिकोप्टरबाट दिउँसो रुम्जाटार १२ः३० बजे आएर सोरुम उद्घाटनपछि ४ः३० बजे काठमाडौं गएका थिए ।
उक्त रुम्जाटार अटोमोवाइल्स कम्पनीमा प्रदेश सभाका सांसद गुरुङको मुख्य लगानी रहेको बताइएको छ । गुरुङकै पहलमा मुख्यमन्त्री राई उक्त कम्पनीको शोरुम उद्घाटन गर्न पुगेका हुन् । यस अघि थाइल्याण्ड हुँदै अमेरिका जाँदा पनि मुख्यमन्त्री राई सांसद गुरुङकै खर्चमा अमेरिकासम्म पुगेको आरोप लगेको थियो ।
निजी कम्पनीको उद्घाटन गर्न मुख्यमन्त्री नै आउनु उयपुक्त नभएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।